Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on June 12, 2012 at 14:43
ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ မေးချင်တာရှိရင် zarni.myway@gmail.com ကိုပို့မေးနိုင်ပါတယ်။ chatting တော့များသောအားဖြင့်သိပ်မသုံးဖြစ်ပါဘူး။ မေးလ်ပို့မေးလို့ရပါတယ်။
Permalink Reply by Zu Zue Aung on May 3, 2017 at 14:01
ခုနောက်ပိုင်း သင်ခန်းစားအသစ်တွေမတင်တော့ဘူးလားမသိဘူးနော် ဟိုးအရင်ကတင်ထားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေပဲတွေ့တယ် email ထဲကိုလဲသင်ခန်းအသစ်တွေမ၀င်တော့ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲသိပါရစေရှင့်
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on May 3, 2017 at 20:59
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ အားပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုတော့ print media ဖြစ်တဲ့ အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်မှာ ပုံမှန်သင်ခန်းစာတွေ အပတ်တိုင်းရေးပေးနေပါတယ်။ online မှာတော့အချိန်ရရင်ပြန်ရေးပေးပါမယ်။
Permalink Reply by Zu Zue Aung on May 4, 2017 at 10:29
Permalink Reply by nyein chan on June 12, 2012 at 17:12
Permalink Reply by 21f4javf07gfi on June 12, 2012 at 17:37
Permalink Reply by 2llc507diy1yz on June 12, 2012 at 18:35
Permalink Reply by Khin Swe Myint on June 13, 2012 at 11:47
Permalink Reply by JOHN KO KO on June 13, 2012 at 13:56
Permalink Reply by aung on June 16, 2012 at 15:40
I thank you for your sharing knowledge. I admit that I have not so familiar with in Presentation. I assume that this is very important role for everyone who are in business fields or other organization.
You may be happy!
Permalink Reply by Nandar Kay Thi on June 19, 2012 at 10:44
ွှ့Thank you for u r post
Permalink Reply by 1skj3djpf84qy on June 24, 2012 at 10:35
Thanks you so much Saya.